Dacwad-qaadayaasha Kiiska - Delta Engineering Beljam
Kaga keydi qeybta "Case Packers"
Baakadaha kiiska ee otomaatiga ah - lakabkiiba
Baakad kiishka semi-otomaatiga ah ee jaban ee lagu rakibo dhalooyinka madhan ee sanaadiiqda kartoonka. Ku dhaji lakabyo badan (baakidh) oo sanduuqa ama boorsada ku dul jiido.
Badanaa waxaa loo isticmaalaa isku dhafka qashinkeena caadiga ah ee VZT21X.
Published in Dacwadaha Kiisaska
Baakad si buuxda otomaatig u ah - safkiiba - sanduuqyo yaryar
Baakadani oo si buuxda otomaatig u ah waxay ku xiran tahay dhalooyin madhan sanduuqyada kartoonka illaa L 800 mm (31 ") x W 600 mm (24") x H 600 mm (24 "). Dhalooyinka si isdabajoog ah ayey u qabanayaan oo waxay ku ridayaan sanduuqa xaggeeda.
Baakad si buuxda otomaatig u ah - safkiiba - sanduuqyo waaweyn
Baakadani oo si buuxda otomaatig u ah waxay ku xiran tahay dhalooyin madhan sanduuqyada kartoonka illaa L 1200 mm (47 ") x W 1000 mm (39") x H 1000 mm (39 "). Dhalooyinka si isdabajoog ah ayey u qabanayaan oo waxay ku ridayaan sanduuqa xaggeeda.
Xidhmada kiiska si buuxda otomaatiga u ah - lakab kasta
Baakadani kiishka oo si buuxda otomaatig u ah waxay ku xiraysaa dhalooyin madhan sanduuqyada kartoonka illaa L 800 mm (31 ”) x W 600 mm (24”) x H 600 mm (24 ”). Foomamka lakabka ah ee dhalooyinka isku xigxiga, ka dibna ku dar lakabka oo dhan sanduuqa.